Twister (1996) | MM Movie Store
သာယာတဲ့မိသားစုလေးတဈစုရှိတယျ….တဈနတေ့ော့ လမေုနျတိုငျးကွီးတဈခုဟာသူတို့နတေဲ့ နယျမွို့လေးကိုဖွတျတိုကျသှားတယျ မိသားစု ၃ဦးရှိတဲ့အထဲက အဖကေိုလမေုနျတိုငျးကွီးက ဝါးမွိုသှားတယျ……အမနေဲ့သမီးပဲကနျြခဲ့လရေဲ့ ….သမီးဖွဈသူဟာ သူ့မကျြစိရှတေ့ငျ မုနျတိုငျးနဲ့ပါသှားတဲ့အဖကေိုတှမွေ့ငျခဲ့လတေော့ စိတျဒဏျရာရခဲ့တယျ….
သူမဟာ အရှယျရောကျလာတော့ မုနျတိုငျးလိုကျမုဆိုးဖွဈလာတယျ…မုနျတိုငျးမလာခငျ ၃မိနဈပဲမိုးလဝေသဌာနက ကွိုတငျသတိပေးနိုငျတော့ ပွညျသူတှအေတှကျ အခြိနျမလုံလောကျဘူး ဒါကွောငျ့ အသကျတှဆေုံးရှုံး စီးပှားတှပေကျြစီးရတယျ သူမဟာ သတိပေးခြိနျမြားမြားရအောငျတှကျခကျြနိုငျဖို့ကွိုးစားတယျ….
သူမနဲ့သူ့ခဈြသူကောငျလေးနဲ့အသကျအန်တရယျတှကွေားကကွိုးစားပုံတှေ ကို ရငျတထိတျထိတျနဲ့ကွညျရမှာဖွဈပွီးကွညျနူးဖှယျ အခဈြဇတျလမျးလေးကိုပါ ခံစားရမှာပါ..
သာယာတဲ့မိသားစုလေးတစ်စုရှိတယ်….တစ်နေ့တော့ လေမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဟာသူတို့နေတဲ့ နယ်မြို့လေးကိုဖြတ်တိုက်သွားတယ် မိသားစု ၃ဦးရှိတဲ့အထဲက အဖေကိုလေမုန်တိုင်းကြီးက ဝါးမြိုသွားတယ်……အမေနဲ့သမီးပဲကျန်ခဲ့လေရဲ့ ….သမီးဖြစ်သူဟာ သူ့မျက်စိရှေ့တင် မုန်တိုင်းနဲ့ပါသွားတဲ့အဖေကိုတွေ့မြင်ခဲ့လေတော့ စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်….
သူမဟာ အရွယ်ရောက်လာတော့ မုန်တိုင်းလိုက်မုဆိုးဖြစ်လာတယ်…မုန်တိုင်းမလာခင် ၃မိနစ်ပဲမိုးလေဝသဌာနက ကြိုတင်သတိပေးနိုင်တော့ ပြည်သူတွေအတွက် အချိန်မလုံလောက်ဘူး ဒါကြောင့် အသက်တွေဆုံးရှုံး စီးပွားတွေပျက်စီးရတယ် သူမဟာ သတိပေးချိန်များများရအောင်တွက်ချက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်….
သူမနဲ့သူ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့အသက်အန္တရယ်တွေကြားကကြိုးစားပုံတွေ ကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည်ရမှာဖြစ်ပြီးကြည်နူးဖွယ် အချစ်ဇတ်လမ်းလေးကိုပါ ခံစားရမှာပါ..